मुम्बई पुग्ने बित्तिकै कंगनाले भनिन्, ‘प्यारो शहर’: उर्मिलाले सोधिन्, ‘टाउको बजारिएर लडेकी थियौ ? | Ratopati
मुम्बई पुग्ने बित्तिकै कंगनाले भनिन्, ‘प्यारो शहर’: उर्मिलाले सोधिन्, ‘टाउको बजारिएर लडेकी थियौ ?
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeपुस १५, २०७७ chat_bubble_outline0
महाराष्ट्र सरकारसँग वाकयुद्धका बेला मुम्बईलाई पाकिस्तान बताइसकेकी बलिउड नायिका कंगना रनौत एकपटक पुनः मायानगरी फिर्ता भएकी छिन् । मंगलबार उनी मुम्बा देवी र श्री सिद्धिविनायक मन्दिर पुगिन् र भगवानको अगाडि शीर झुकाएर आशीर्वाद लिइन् । केही महिना अघि मात्रै कंगनाले मुम्बईलाई तथानाम भनेकी थिइन् र महाराष्ट्र सरकारलाई तालिबान बताउने उनको ट्वीटरमाथि मज्जाले विवाद भएको थियो ।
कंगनाले ट्वीट गरिन्, ‘आफ्नो प्यारो मुम्बईका लागि उभिनका लागि मैले जति विरोधको सामना गर्नुपर्यो, त्यसले मलाई हैरानीमा पारेका छ । आज म मुम्बा देवी र श्री सिद्धिविनायक जी भएठाउँ गएर उहाँहरुको आशीर्वाद लिएँ । अब म सुरक्षित, प्रेमले भरिपुर्ण र पुनः स्वागत गरिएको झैं महसुस गरिरहेको छु । जय हिन्द जय महाराष्ट्र ।’
उनको यो ट्वीट देखेपछि उर्मिला मातोंडकरले आफ्नो ट्वीटर ह्यान्डलमा मराठीमा ट्वीट गरिन्, ‘आफ्नो प्यारो शहर मुम्बईका लागि खडा हुनका लागि ? बहिनी, के हालै टाउको बजारिएर लडेकी थियौ ?
स्मरण रहोस्, सेप्टेम्बरमा कंगना र उर्मिलाको मज्जाले वाकयुद्ध चलेको थियो । उर्मिलाले कंगनालाई मुम्बईका लागि गरिएको उनको कमेन्ट र बलिउडमा ड्रग्सको प्रयोग गरिएको बारे मज्जाले हमला गरेकी थिइन् ।
ड्रग्स मामिलामा भनेकी थिइन् यसोः
उर्मिलाले एक अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘यदि कंगना ड्रग्सविरुद्ध लडाईं लड्न चाहन्छिन् भने उनले आफ्नो होम टाउनबाट हिमाचल प्रदेशबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । ’ उर्मिलाले पूरा देश ड्रग्सको समस्यासँग झेलिरहेको र हिमाचल प्रदेश ड्रग्सका लागि उद्गम स्थल भएको बताएकी थिइन् ।